မဗေဒါရဲ့ ဗေဒါလမ်း: သင်မသိကောင်း မသိသေးမဲ့ Park Bo Gum အကြောင်းလေးတွေ
Park Bo Gum ကိုယ်ရေးအကြောင်းတွေ မွေးနေ့တွေ သွေးအမျိုးအစားတွေ ဘာတွေတော့ ထွေထူးရေးမနေတော့ပါဘူး။ တခြား Facebook page တွေကလဲ တော်တော်လေး ရေးပြီးထားကြပြီဆိုတော့လေ။ အစကတော့ ကိုယ်တောင် သိပြီးတာ အားလုံးလဲ သိပြီးလောက်ပြီဆိုပြီး မရေးတော့ပဲ နေမလို့ မဗေဒါ Page က ဝါသနာတူ ဘော်ဘော်တွေက ရေးပေးပါဆိုလို့။ တချို့က Park Bo Gum အကြောင်းကို သူကိုယ်တိုင်လာပြောပြထားသလို သိနေကြတဲ့ သူတွေရှိတော့ ကိုယ်လို အွန်လိုင်းက သတင်းလေးတွေ ဟိုဖတ်ဒီဖတ်လုပ်မှ သိရတဲ့ ကိုယ်က ဆရာလုပ်သလိုဖြစ်မိမှာစိုးလို့။ ကြိုဝန်ခံပါရစေနော်… သူ့အကြောင်း လဲ ရေးတဲ့ သတင်းကို ကြုံလို့ဖတ်ရမှ သိတာပါ။ ခုလဲ ကိုယ်တွေ့တာကို ပြန်မျှတာပါ သတင်းမှားဆိုရင် မူရင်း သတင်းရေးတဲ့သူအပြစ်ပါ။
၁။ Park Bo Gum မှာ အကျအနရိုက်ထားတဲ့ မိသားစုပုံမရှိဘူး
TvN ကပြတဲ့ Youth Over Flower ခရီးသွားအစီအစဉ် Reality show မှာ Park Bo Gum နဲ့ Reply 1988 က ဒုမင်းသား Ryu Joon Yeol တို့ ၂ယောက် ရင်တွင်းဖြစ် စကားတွေပြောကြတဲ့ အချိန်… Bo Gum က ဟိုမင်းသားကို “ံဒါနဲ့ Hyung မှာ မိသားစု ဓာတ်ပုံရှိလား?” လို့ မေးရင် သူ့ မျက်ရည်တွေကို သုတ်လိုက်တယ်။ “ကျွန်တော်တို့ အိမ်မှာ မိသားစု ဓာတ်ပုံမရှိဘူး” လို့ ပြောရင် သူ့ မျက်ရည်တွေ စီးကျလာတယ်။ Bo Gum ငိုတာကို တွေ့တဲ့ Joon Yeol က သူ့ကို “ ဒီတစ်ခါ ကိုရီးယားပြန်ရောက်ရင် မင်းတို့ မိသားစု ဓာတ်ပုံ သွားရိုက်။ Hyung ပိုက်ဆံပေးမယ်” လို့ နွေးထွေးစွာပြန်ပြောတယ်။
အဲ့ဒိအကြောင်းကို Production crew တွေနဲ့ interview ချိန်ရောက်တော့ မေးတော့ Bo Gum က ငိုလျက်
“ကျွန်တော် ငယ်ငယ်က memories တွေကို မစုထားခဲ့နိုင်သလို ခံစားရတယ်။”
“အမေက ကျွန်တော် ကြီးလာတဲ့ တစ်လျှောက် ကျွန်တော့်ကိုပဲ ပုံတွေရိုက်ထားခဲ့တယ်။ အမေ့ပုံကျတော့ ကျွန်တော့မှာ ပြစရာ မရှိသလောက်ပဲ။ အဲဒါကြောင့် ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Memories တွေကို မသိမ်းဆည်းထားလိုက်နိုင်သလို ခံစားရတယ်။”
၂။ သူ့ အမေအကြောင်း စဉ်းစားမိပြီး Reply 1988 Audition မှာ ငိုခဲ့တဲ့ Park Bo Gum
အရှေ့မှာပြောခဲ့တဲ့ Youth over flower အစီအစဉ်ထဲမှာပဲ သူတို့တွေ Reply 1988 အတွက် audition ဝင်ခဲ့တဲ့ ဗွီဒီယိုလေးကိုကြည့်ရတယ်။ အဲ့ဒိ လူတွေ့ စစ်ဆေးမှုမှာ အင်တာဗျူးသူတွေက သူ့အမေအကြောင်းကို မေးတဲ့အခါ “ကျွန်တော် ၄တန်းကတည်းက အမေဆုံးသွားပါပြီ” လို့ သူပြန်ဖြေခဲ့တယ်။
အဲ့ဒိနောက်မှာ အင်တာဗျူးသူတွေက သူ့ကို Reply 1994 က ဒုတိယမင်းသား Chil Bong’s ဇာတ်ကောင်ပြောခဲ့တဲ့ ဒိုင်ယာလော့ကိုပေးပြီး သရုပ်ဆောင်ခိုင်းတယ်။ ဒိုင်ယာလော့ကို စဖတ်တာနဲ့ Bo Gum ဟာ မျက်ရည်တွေဝဲလာခဲ့တယ်။
သူ့ကို ဖတ်ခိုင်းတဲ့ အခန်းက Chil Bong သူ့အမေကို ဖုန်းပေါ်ကနေ မတ်စေ့ထားခဲ့တဲ့ အခန်းက ဒိုင်ယာလော့ဖြစ်နေတယ်။ ဖတ်နေရင်း တစ်ဝက်လောက်မှာ Bo Gum ဝမ်းနည်းစွား မျက်ရည်ပေါက်ကြီးငယ် ကျလာခဲ့တယ်။
(Youth over flower ကြည့်တုန်းက အဲ့ Audition လေးကိုကြည့်ပြီး Reply 1988 မှာ တကယ်ပဲ သူ ပထမ မင်းသား ဖြစ်ထိုက်ပါတယ်ဆိုပြီး ကိုယ့် ship အတွက် ကိုယ် ကျေနပ်သလို၊ သူ့ဘဝအကြောင်းလေး သိရတော့ ကိုယ်ပါ လိုက်ငိုနေမိတယ်)
၃။ Park Bo Gum ဟာ အကြွေးတွေမဆပ်နိုင်လို့ လူဆင်းရဲ့ အမည်ခံ ခဲ့ဘူးတယ် (Bankrupt)
သူဟာ သူ့နာမည်နဲ့ ချေးထားတဲ့ အကြွေးတွေ ပြန်မဆပ်နိုင်လို့ တရားဝင်လူဆင်းရဲ စာရင်းဝင်ခဲ့ဖူးတယ်။
သူ့ အေးဂျင်စီကတော့ “သူငယ်စဉ်မှာဖြစ်ခဲ့တဲ့ သူ့ကိုယ်ရေးကိုယ်တာကိစ္စမို့ ကျွန်တော်တို့ အသေးစိတ်မသိပါဘူး။ ကျွန်တော်တို့သိတာတော့ ပြဿနာတွေအားလုံး မနှစ်က ဖြေရှင်းပြီးသွားပါပြီ။ ခု ဘာပြဿနာမှ မရှိတော့ပါဘူး” လို့ဆိုပါတယ်။
ဒါပေမဲ့ တချို့ သတင်းဋ္ဌာနတွေအရ အဲ့ဒိအကြွေးဟာ ၂၀၀၈ ခုနှစ်က သူ့အဖေ စီးပွားရေးလုပ်ဖို့ သူ့နာမည်နဲ့ ချေးငှားခဲ့ပြီး စီးပွားရေး မအောင်မြင်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်တဲ့။ အဲ့ဒိအချိန်က Park Bo Gum ဟာ ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်ပဲ ရှိသေးပြီး သူ့အဖေအကြွေးကို ပူးတွဲ ချေးငှားသူအဖြစ် ပါဝင်ခဲ့ပါတယ်။ နောက်ပိုင်းမှာ များပြားလာတဲ့ အတိုးနှုန်းတွေကြောင့် ခုလို ဖြစ်ခဲ့တာပါ။
၂၀၁၄ မှာ သူဟာ ဇာတ်ပို့သရုပ်ဆောင်အဖြစ် တချို့ကားလေးတွေမှာ ပါဝင်လာတဲ့အခါ Loan Shark တွေက အကြွေးအကြေ ချက်ချင်းပြန်ဆပ်ဖို့ တောင်းဆိုခဲ့ကြပါတယ်။ Bo Gum က မပေးနိုင်တဲ့အခါ တရားရုံးမှာ တရားစွဲဆိုခံခဲ့ရပါတယ်။
တရားရုံးမှာ Bo Gum က သူဟာ အဲ့ဒိအချိန်က အသက်မပြည့်သေးတဲ့ အပြင် သူ့အဖေက သူ့ကို Guarantor အဖြစ် နာမည်ထည့်ခဲ့မှန်း လုံးဝ မသိခဲ့ပါဘူးလို့ ထွက်ဆိုခဲ့တယ်။ အကြွေးပြန်မဆပ်နိုင်တဲ့အတွက် ဒီဇင်ဘာ ၂၀၁၄ မှာ Park Bo Bum ဟာ လူဆင်းရဲစာရင်း(Bankruptcy) ခံခဲ့တယ်။ မတ်လ ၂၀၁၅ မှာ သူဟာ လူဆင်းရဲ စာရင်းဝင်မို့ တရားရုံးက အကြွေးရှင်တွေကို အကြွေးတွေ လျော့ပေါ့ဖို့ စီရင်ခဲ့ပေမဲ့ အကြွေးရှင်တွေကတော့ Bo Gum ဟာ သရုပ်ဆောင်တစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့အတွက် အကြွေးကိုပေးနိုင်တဲ့ အခြေအနေရှိတယ်လို့ စွပ်စွဲခဲ့တယ်။
အဲ့ဒိအတွက် တရားရုံးက ဘိုဂမ်းရဲ့ ဝင်ငွေကို စစ်ဆေးခဲ့ပြီး မူလချေးငွေ $243,765 USD ကနေ $24,390 USD (30 million KRW) နီးပါးကို တော့ ပေးစေခဲ့တယ်။
Reply 1988 ရဲ့ အောင်မြင်မှုကြောင့် နောက်ပိုင်းမှာ Park Bo Gum ဟာ အကြွေးအားလုံးကို ခြေနိုင်ခဲ့တယ်။
Park Bo Gum ရဲ့ အဖြစ်ဟာ သူ နာမည်မကြီးသေးခင်က ရိုက်ခဲ့တဲ့ “Coin Locker Girl” ထဲက သူ့ဇာတ်ကောင်နဲ့ တိုက်ဆိုင်နေတယ်လို့ လူတွေက ပြောကြတယ်။
(အဲ့ကား Bo Gum လေးပါလို့ ကြည့်ပြီးပြီ။ စိတ်တွေ အရမ်းဆင်းရဲပါတယ်။ အဲ့ထဲမှာလဲ သူ့အဖေက loan shark ဆီက ပိုက်ဆံချေးပြီး ထွက်ပြေးနေလို့ loan shark က သူ့ကို လာသတ်သွားတာ။ မင်းသားလေးခမျာ သူဠေးသားရုပ်လေးဖြစ်ပါရက်၊ မင်းသားမဖြစ်ခင် ခုလို ချို့ချို့တဲ့တဲ့လေးဆိုတော့ သနားထှာ။ အာ့ကြောင့် ခုလို သူအောင်မြင်လာတာ ကိုယ်က ဘာရယ်မဟုတ် ဝမ်းသာနေတယ်။)
A scene from "Coin Locker Girl" movie
၄။ သူဟာ ခုထက်ထိ အများသုံး ရထားစီးတုန်းပဲ
မင်းသားချော Park Bo Gum ဟာ ခုချိန်မှာ အောင်မြင်တဲ့ သရုပ်ဆောင်တစ်ယောက်ဖြစ်နေသော်လည်း သူဟာ ခုထက်ထိ အများသုံး ပို့ဆောင်ရေးစနစ် (အများသုံး ရထား၊ ဘတ်စ်ကား) နဲ့သာ သွားလာနေတုန်းပါပဲ။ Moonlight Drawn by Cloud နဲ့ Music Bank ရိုက်ကူးနေတဲ့အပြင် တခြား Schedule တွေအများကြီး ရှိနေပေမဲ့ ဘိုဂမ်းဟား ခုထက်ထို အများသုံး ရထားကိုစီးကာ သူ့အတန်းတွေနဲ့ သူ့ အေဂျင်စီကို သွားလာနေတုန်းပါပဲ။ အရင်က လုပ်ခဲ့တဲ့ အင်တာဗျူးတစ်ခုမှာ သူ့ ကိုယ်ပိုင်ဘဝအကြောင်းကို အများကိုထုတ်ပြောရတာ မကောင်းပေမဲ့၊ အများသုံးရထားစီးတာကိုတော့ ဘယ်တော့မှ ရပ်မှာမဟုတ်ပါဘူးတဲ့။
သူ့လို နာမည်တက်နေတဲ့ မင်းသားတစ်ယောက်ကို အများသုံး ရထားပေါ်မှာသာ တွေ့ရင် ပရိတ်သတ်တွေအုံတာ ခံရမှာမို့ သူ့ လုံခြုံရေးအတွက် စိုးရိမ်စရာပါပဲ။ ပုံမှန်အားဖြင့် နာမည်ရ ဆယ်လီတွေဟာ အများသုံးပို့ဆောင်ရေးကို မစီးကြတော့ပဲ ကုမ္ဗဏီက စီစဉ်ပေးတဲ့ ကားနဲ့ပဲ သွားလာကြတာများပါတယ်။
သူ့ကိုနောက်ပိုင်း ရထားစီးထားရပ်လိုက်မှာလားလို့ မေးတဲ့အခါမှာ Park Bo Gum က “ဘာလို့လဲ? ရထားနဲ့သွားရတာ မြန်ပြီး အချိန်မှန်တယ်။ တစ်ယောက်ယောက်နဲ့ ချိန်းထားရင် ရထားစီးသွားတာ အကောင်းဆုံးပဲ။ ဝမ် ၁၃၀၀ ပဲပေး။ ဆိုလ်းတစ်မြို့လုံး ကြိုက်တဲ့နေရာသွားလို့ရတယ်” လို့ ရိုးရိုးလေးပဲ ပြန်ဖြေသွားတယ်။
၅။ Bo Gum နာမည်ကြီးလာတဲ့ နှုန်းက တခြားမင်းသားတွေထက် မြန်တယ်
A scene from "Reply 1988" as genius baduk player
လွန်ခဲ့တဲ့ ၄နှစ်ကမှ Bridal Mask မှာ အဓိက ဇာတ်ပို့တောင်မဟုတ်ဘူး ရဲသားလေးတစ်ယောက်အနေနဲ့ ပါခဲ့တဲ့ (ဘယ်သူမှတောင် သတိထားမိခဲ့မှာမဟုတ်တဲ့) Park Bo Gum ဟာ ခုဆိုရင် နှုတ်ခမ်းနီမလေးတွေ အသည်းစွဲဖြစ်နေပြီလေ။
သူပထမဆုံး Debut ဖြစ်ခဲ့တဲ့ ရုပ်ရှင်ဟာ လွန်ခဲ့တဲ့ ၅နှစ်က မင်းသမီး Kim Ha Neul ပါတဲ့ Blind ဆိုတဲ့ ကားဖြစ်တယ်။ ၂၀၁၅ မှာ သူဟာ Reply 1988 နဲ့ ခေါင်းဆောင်မင်းသားအဖြစ် ပါဝင်ခွင့်ရနေပြီလေ။ တချို့မင်းသားတွေဆို ဒုတိယမင်းသားကနေ တက်မလာတာတွေ။ ပထမ မင်းသားဖြစ်ပြီးမှ နောက်တစ်ကားမှာ ဒုတိယမင်းသားအဖြစ် ပြန်ကျသွားတာတွေ။ နောက်ပိုင်း ပေါ်မလာတော့တာတွေတောင် ရှိတယ်။ သူက တက်သွားတာ ဒိန်းဒိန်းဒိန်းကနဲပဲ။
A scene from "Tomorrow Cantabile" as talented Musician
A scene from "Hello, Monster" as Psychopath Killer and Lawyer and younger brother (This drama is where I found his talent and make me crazy about him)
At His Fan meeting... He was overwhelmed by the response of the fans.
Posted by mabaydar at 5:11 PM
youth over flower in africa ကို ခုၾကည့္ေနတာ PBG တကဲ့ကို cry baby လိုေလးပဲ
2 days 1 night ထဲမွာလဲ ေလထီးစီးရင္းေတာင္ thank you ေျပာေနေရာ သူ႕ ဘဝ အရမ္းၾကမ္းခဲ့လို႕ ခုလို မ်ိဳး ျဖစ္လာတာကို ေတာ္ေတာ္ greatful ျဖစ္ေနတဲ့ပုံေလး
9/27/2016 5:32 PM
အဲ့ကားဖဘေပၚမွာ ေတြ႕ေတြ႕ေနတုန္းက ဘုရင္ကေနတဲ့ပံုကိုၾကည့္ျပီး မင္းသားကိုမၾကိဳက္ဘူး(သူ႕ကို တခါမွလဲ ေသခ်ာမၾကည့္ဖူးဘဲနဲ႕) မၾကည့္ဘူးဆိုျပီးေနေနတာ။ ေနာက္လူေျပာမ်ားလို႕ သြားၾကည့္ျဖစ္ေတာ့မွ ၾကိဳက္သြားတယ္(မင္းသားကို)
ေနာက္ဆံုးပံုေလးၾကည့္ျပီး ကိုယ္ေတာင္ငိုခ်င္သြားတယ္......... :(
9/27/2016 6:01 PM
<3 <3 <3 သိပ္ ခ်စ္ သနားစရာ စိတ္ရင္းေကာင္းတဲ့ ကေလးေလး
9/27/2016 7:33 PM
ကိုရီးယားကားကို ၾကည့္ေလ့မရွိဘူး။ ဒါေပမဲ့ ထူးထူးျခားျခား dots နဲ႔ moonlight ကို ေသခ်ာေစာင့္ၾကည့္ျဖစ္တယ္။ dots ကေတာ့ မင္းသားေရာ မင္းသမီးေရာႀကိဳက္လို႔။ ဒီကားကေတာ့ မင္းသားဝတ္စံုနဲ႔ကေနတာေတြ႕ၿပီး သူ႔ ႀကိဳက္လို႔ ငိငိ။ ဒီညလည္း ေစာင့္ၾကည့္ရဦးမယ္။ :D
9/27/2016 9:35 PM
May Zuri said...
ညီမေလးေရ --သူ႔အေၾကာင္းကို ေန႔တိုင္းလိုလို လိုက္ရွာဖတ္ျဖစ္တယ္။ တေန႔တေနPark Bo Gum update ႔ ဆိုတဲ့ေခ့င္းစဥ္ေအာက္မွာ family history ႐ိုက္ၿပီးရွာလိုက္ sibling ႐ိုက္ၿပီးရွာလိုက္ Youtube မွာ သူနဲ႔ဆိုင္တဲ့ အေၾကာင္းအရာေတြ ရွာလိုက္နဲ႔ အခ်ိန္ကုန္ေနေပမယ့္ သူ ျဖစ္တယ့္အေၾကာင္း ခုမွသိရတယ္။ ရထားစီးေနတုန္းဆိုတဲ့အေၾကာင္း - မိသားစုပံုမရွိတဲ့အေၾကာင္းနဲ႔ အာဖရိကသြားမယ့္ဆဲဆဲ ဘုမသိဘမသိနဲ႔ကားေပၚပါငြားၿပီး အိမ္ကဖုန္းလာလို႔ ဖုန္းေျပာေနတဲ့ သူ႔ပံုေလးေတြခ်စ္လြန္းလို႔ video downloader နဲ႔ ေဒါင္းၿပီးထပ္ခါၾကည့္မိတဲ့အထိပဲ။ ဆုယူတိုင္း ဘုရားအေၾကာင္းေျပာရတာလည္းအေမာ။ Church Boy ေလးဆိုေတာ့။ အဲ့ကေလးေလး ဒီထက္ေအာင္ျမင္အုန္းမွာ။ ျဖဴစင္မႉအရင္းခံေတြေရာင္ျပန္ဟပ္တာေနမွာ။. ဒါေလးဖတ္လိုက္ရတာ သူ႔ကိုပိုခ်စ္ရတယ္။ ေက်းဇူးေနာ္။
9/27/2016 11:15 PM
မေဗဒါဘေလာ႔ တကူးတကလာၿပီး ဖတ္ျဖစ္ပါတယ္ း)
10/01/2016 10:01 PM
Hnin Wut yee said...
ကိုရီးယား ကား‌ေတြမႀကိဳက္‌လို႔မႃကည္‌့ျဖစ္‌ဘူး dots ၾကည္‌့ပီး ႐ူး‌ေနတုန္‌း သူက‌ေနတဲ့ video ‌ေလး‌ေတြပီးအသည္‌းအသန္‌႐ွာၾကဘ္‌့ခဲ့တာ ဒီ‌ေန႔ထိဘဲ သူကအရမ္‌းခ်စ္‌တတ္‌တဲ့ပံု‌ေလး အ့ကိုခ်စ္‌တာ
10/05/2016 1:28 AM
10/05/2016 1:29 AM
W - Two Worlds Review